Ukuziphendulela kweNdlela yokuBonelela
UkuBoniswa kweNdlela yokuThatheliswa
Ubunzima obukhuselekileyo bokukhupha amanzi
Inkqubo yokugqibela okanye ukusabela kuthatha amandla ngendlela yokushisa (i-endergonic inkqubo okanye ukuphendula kuthatha amandla, kungekhona njengokushisa). Imizekelo yeenkqubo ezigqibeleleyo ziquka ukuncibilika kweqhwa kunye nokuxinezeleka kwezinto ezinokunyanzeliswa.
Kuzo zombini iinkqubo, ubushushu buxhomekeke kwimeko. Unokurekhoda utshintsho lokushisa usebenzisa i-thermometer okanye ukuziva ukuphendula ngesandla sakho.
Impendulo phakathi kwe- citric acid kunye ne-baking soda ngumzekelo okhuselekileyo wendlela yokuphendula ngayo , esetyenziswa ngokuqhelekileyo njengomboniso wekhemisti . Ngaba ufuna impendulo engapheliyo? I-hydroxide eqiniweyo ye-barium eyenziwa nge thimonyanate eqinile yammonium ivelisa i-barium thiocyanate, i- ammonia gas , kunye namanzi amanzi. Lo mphenduko uhla ukuya kwi -20 ° C okanye -30 ° C, ephezulu kunokuba kubanda ngokwaneleyo ukuze kufakelwe amanzi. Kubanda kakhulu ngokwaneleyo kukunika isithwathwa, ngoko qaphela! Impendulo ithatha ngokulandela ukulingana okulandelayo:
Ba (OH) 2 . 8H 2 O ( s ) + 2 NH 4 SCN ( s ) -> Ba (SCN) 2 ( s ) + 10 H 2 O ( l ) + 2 NH 3 ( g )
Nakhu okufuneka usebenzise le mpendulo njengomboniso:
32g ye-barium hydroxyde octahydrate
17g ammonium thiocyanate (okanye unokusebenzisa i-ammonium nitrate okanye i-ammonium chloride)
Phala i-hydroumide ye-barium kunye ne-ammonium thiocyanate kwi-flask.
Iphunga le-ammonia kufuneka libonakale malunga nemizuzwana engama-30. Ukuba ubambe isiqwenga sephepha elidambeneyo elibhekiselele ekuphenduleni ungabuka utshintsho lombala obonisa ukuba igesi eveliswa yindlela yokuphendula isisiseko.
I-Liquid iya kuveliswa, leyo iya kufakelwa kwi-slush njengoko impendulo iqhubeka.
Ukuba ubeka i-flask kwi-block ebomvu yokhuni okanye iqela lekhadibhodi ngelixa lenza impendulo ungashenxisa phantsi kwebhola kumthi okanye iphepha. Ungachukumisa ngaphandle kwebhola, kodwa ungayibamba ngesandla sakho ngelixa uqhuba impendulo.
Emva kokuba umboniso ugqityiwe, iziqulatho zeflask zinokuhlanjululwa phantsi kwe-drain kunye namanzi. Musa ukusela iziqulatho zeflask. Gweba udibaniso lolusu. Ukuba ufumana isisombululo esikhumbeni sakho, susa amanzi.
Iiprojekti zeKhompyutha zeHholide
I-Distapage Color Colors
"Ibali loSuku lokuzibulala" nguBonnie Parker
Iingelosi: Izinto zokuKhanya
Iinkqubo zoMbuzo zoTitshala eziphumelelayo
Agasti Burns Red
Ukuqonda Ukuthatha inxaxheba kwixesha elidlulileyo kunye nelidala
Indlela yokuCwangcisa okuBalulekileyo
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: iMfazwe yaseLake George
Ikululeko yeNational Golf Club Umfanekiso
I-13 ye-Movie War Scenes Scenes ye-All Time